5 Dibad baxayaal ah oo lagu toogtay bartama magaalada Baqdaad.
Sunday November 10, 2019 - 08:47:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wadanka Ciraaq wali waxaa kasii socda kacdoonnada shacbiga ah ee lagu diidanyahay xukuumadda Musuq Maasuqa ku caanbaxday ee ay madaxda u yihiin hoggaamiyaha Shiicada.
Iskusoo baxyo rabshado wata ayaa lagasoo sheegayaa sedaxda magaalo ee ugu waaweyn wadanka Ciraaq, dibad baxyada ugu daran oo isku bedelay iska hor'imaadyo ayaa ka dhacay fagaarayaasha waaweyn ee magaalada Baqdaadi.
Ilo wareedyo caafimaad ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof dibad baxayaal ah ladilay tobanaan kalane dhaawacyo soo gaareen kadib markii ciidamada ammaanka ay rasaas ku fureen fagaaraha Taxriir ee magaalada Baqdaad.
Wakaalaha wararka ayaa sheegaya in ciidamada xukuumadda ay la wareegeen gacan ku heynta illaa 5 kamid ah buundooyinka istitaatiijiga ah ee magaalada Baqdaad oo isbuucii lasoo dhaafay ay qabsadeen dadka dibad baxyada dhigaya.
Buundooyinka ugacan galay ciidamada xukuumadda Ciraaq waxaa kamid ah Alkhallaani oo fadhi u aheyd dibad baxayaasha, magaalada Baqdaad waxaa kuyaall illaa 12 Buunddo oo ka duldhisan wabiga Dajllah.
Ciraaq oo ah dalka 2aad ee soo saara shidaalka ugu badan caalamka ayay dadkiisu ka cabanayaan faqri iyo hoos udhac dhanka dhaqaalaha ah sababa laxiriira hoggaamiyaasha faasidiinta ah oo lunsaday hantidii dadka ka wada dhaxaysay.